Social Bonding သည် Dopamine D1 Receptor-Mediated ယန္တရားမှတဆင့်အမ်ဖီတမင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုလျော့ချပေးသည်။
လူမှု Bond တစ်ဦး Dopamine D1 receptor-mediated ယန္တရား (2011) မှတဆင့်ဖက်တမင်းဆေးပြားများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်း Properties ကိုနည်းချင်နည်း
J ကို neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဒီဇင်ဘာ 1, 2011 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
J ကို neuroscience ။ ဇွန် 1, 2011; 31 (22): 7960-7966 ။
Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1006-11.2011
yan လျူ,1,2 Kimberly တစ်ဦးကလူငယ်,1,2 J ကိုသောမတ်စ် Curtis,3 Brandon J ကို Aragona,4 နှင့် Zuoxin ဝမ်2,5
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု / အလွဲသုံးစားမှုအပေါ်လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပေမယ့်ကျနော်တို့နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိကြ၏။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အသုံးပြုခြင်း (Microtus ochrogasterမိတ်လိုက်-ကျနော်တို့စိတ်ကြွဆေး (AMPH) အေးစက်နေတဲ့ conditional ရာအရပျလိင်ရင်တော့မှားမယ်အတွက် preference ကို (CPP က) (SN), ဒါပေမယ့်တွဲ-ကပ်လျက်တည်ရှိမဟုတ် (PB), အထီးသွေးဆောင်ကွောငျးတငျပွပြီးနောက်ရေရှည် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်) -a လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်။ AMPH ကုသမှု SN နှင့် PB ယောက်ျား၏နျူကလိယ accumbens အတွက် DA လွှတ်ပေးရေးအလားတူပြင်းအား (NACC) သွေးဆောင်သော်လည်း NACC D1 အဲဒီ receptor အပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (D1R) binding ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသ AMPH ကုသမှု SN အတွက် binding D1R တိုးလာပေမယ့် PB ယောက်ျားအတွက် binding D1R လျော့နည်းသွားသည်။ NACC D1R, ဒါပေမယ့်မရ D2R, ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း SN ယောက်ျားအတွက် AMPH-သွေးဆောင် CPP ကပိတ်ဆို့နှင့်ကြိုတင် AMPH အေးစက်မှ NACC D1R activation PB ယောက်ျားအတွက် AMPH-သွေးဆောင် CPP က enabled ။ အတူတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကြောင့် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကိုတစ် D1R ကမကထပြုခဲ့ယန္တရားမှတဆင့် AMPH ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကျဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာကောင်းစွာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုလူမှုရေးဘွန်းအပါအဝင်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးအပေါ်လေးနက်အကျိုးဆက်များ, (ရှိသည်အသိအမှတ်ပြုလူငယ်တို့ et al ။ , 2011a) ။ အပြန်အလှန်ထိုကဲ့သို့သောဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းသို့မဟုတ်လူကြီးတစ်လျှောက်လုံးခိုင်မာတဲ့လူမှုရေး attachment များကို၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းအဖြစ်လူမှုရေးအကြောင်းရင်းများ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက် impact လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခိုင်မာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်-မိဘနဲ့ attachment ပါဆက်နွယ်ခဲ့ကြ (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြဿနာများ၏အလေးသာလျော့နည်းသွားEllickson et al ။ , 1999; ခေါင်းလောင်း et al ။ , 2000) ။ ထို့အပြင်လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပြီးသားမူးယစ်ဆေးစွဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်အိမ်ထောင်ဖက်အကူအညီများအကြားစွဲ, အနီးကပ်ဆက်ဆံရေး (နေသောKosten et al ။ , 1987) ။ မလုံခြုံသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူကို attachment စတိုင်များအပြုသဘောအရက်နှင့်တရားမဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်အဖြစ်မတူဘဲ, အားနည်းလူမှုရေး attachment များကို (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအားနည်းချက်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါနန်နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, 1995; Vungkhanching et al ။ , 2004; Caspers et al ။ , 2005).
လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း / အလွဲသုံးစားမှုများအကြားအပြန်အလှန်အခြေခံအဆိုပါအာရုံကြောယန္တရားများနေဆဲအကြီးအကျယ်မသိသောဖြစ်ကြောင်း, သို့သော် mesolimbic dopamine နျူကလီးယပ် accumbens အတွင်း (DA) စနစ်-အထူးသဖြင့် DA neurotransmission (NACC) ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကို -may (လူငယ်တို့ et al ။ , 2011a) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လေ့လာစရာများ (Microtus ochrogasterအရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက်အကြားအမြဲတည်သောခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်) -a လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက် (ဆိုလိုသည်မှာ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်) (Insel နှင့် Hulihan, 1995; Mattson et al ။ , 2001) -have NACC DA (pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှစ်ဦးစလုံး mediates ကြောင်းပြသGingrich et al ။ , 2000; Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006) ။ ထို့အပြင် NACC DA neurotransmission (အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးသိကြမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ်di Chiara နှင့် Imperato, 1988; Bergman et al ။ , 1990; Koob နှင့် Nestler, 1997; Nestler, 2005) နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု (DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်အဲဒီ receptor sensitivity ကိုအဖြစ် NACC အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲဟင်နရီ et al ။ , 1989; Robinson နဲ့ Kolb, 1999) ။ ဤအပြောင်းအလဲများ (အပြုအမူအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြုပြင်မွမ်းမံအခြေခံမှထင်နေကြတယ်Robinson နဲ့ Becker က, 1986), လူမှုရေးအပြုအမူတွေအပါအဝင် (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999).
pair တစုံဘွန်းအပြုအမူနှင့် NACC အတွင်း DA neurotransmission နေဖြင့်ယင်း၏စည်းမျဉ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အမျှ (ထိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ကောင်းစွာစရိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်ရပြီGingrich et al ။ , 2000; Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006), မကြာသေးမီအားထုတ်မှုလူမှုရေးစဘွန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း / အလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်က၎င်း၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများအကြားအပြုအမူအပြန်အလှန်ဆန်းစစ်ဖို့ရာအတွက်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်ဤမျိုးစိတ်တည်ထောင်ရန်ကြပြီ။ AMPH အေးစက်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) induces အဖြစ် AMPH (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဖို့ပြသထားသည်Aragona et al ။ , 2007; လျူ et al ။ , 2010; လူငယ်တို့ et al ။ , 2011b), နှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို (NACC အတွက် DA neurotransmission ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်Curtis နှင့်ဝမ်, 2007; လျူ et al ။ , 2010) ။ အများစုမှာစိတ်ဝင်စားစရာအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် pair တစုံဘွန်း၏ဤ AMPH-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးအတွက် NACC DA D1-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် (D1R) activation (AMPH ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်လျူ et al ။ , 2010) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကို AMPH ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့ချခြင်းနှင့် NACC DA ဒီအမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါမယ်လို့တွေးဆ။
ဘာသာရပ်များ (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခဲ့ကြသည်အမ် ochrogaster) တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှ။ ဘာသာရပ်များ (21 × 12 × 28 စင်တီမီတာ) အသက် 16 ရက်ပေါင်းမှာနို့နှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်လိင်တူချင်း sibling အားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ ရေနှင့်အစားအစာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum။ အားလုံးလှောင်အိမ်တစ်ခု 14 အောက်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်: 10 အလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာနှင့်အပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိုထားခဲ့ပါတယ်။ အသက် 75 ရက်ပေါင်းန်းကျင်ဘာသာရပ်များဖြစ်စေအဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့လိင်တူချင်းမှေးခငျြးမြားနှငျ့သျော (နှင့်အရှင်လိင်ရင်တော့မှားမယ် (SN) ထားရှိမည်) သို့မဟုတ် (PB) ကပ်လျက်တည်ရှိ pair တစုံဖြစ်လာဖို့နှစ်ပတ်အတွင်းတစ်ခုသက်ဆိုင်တဲ့နဂိုအတိုင်းမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအတူတွဲခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး SN နှင့် PB ဘာသာရပ်များအသက်အရွယ်လောက် 90 ရက်ပေါင်းမှာစမျးသပျခဲ့သညျ။
AMPH အေးစက်နှင့် CPP စမ်းသပ်ခြင်း
ဤရွေ့ကားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြလျူ et al ။ , 2010; လူငယ်တို့ et al ။ , 2011b) ။ အတိုချုပ်, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်စမ်းသပ်ယန္တရားနှစ်ခုကိုအိတ်များပါဝင်သည် (12 × 28 × 16 စင်တီမီတာ); တစ်ဦးဆွန်းပြွန် (7.5 × 16 စင်တီမီတာ) ကပူးပေါင်းသတ္တုထိပ်ဖျားနဲ့တစ်ကွက်ထိပ်တန်းနှင့်တသားတအဖြူနှင့်တသားတအနက်ရောင်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ယေဘုယျအားဖြင့် (အမှောင်ထဲမှာလှောင်အိမ်ကျော်အဖြူပိုနှစ်သက်လေ့ရှိသျောလညျးAragona et al ။ , 2007), ဒီ preference ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်မှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, နေ့ 1 အပေါ်ကျနော်တို့ 30 မိ Pre-စမ်းသပ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ကနဦးလှောင်အိမ်ဦးစားပေးဘို့အားလုံးဘာသာရပ်များစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းအားလုံးဘာသာရပ်များနှစ်ဦးစလုံးအိတ်များအခမဲ့ရယူသုံးစွဲခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီလှောင်အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသည်အချိန်ပမာဏကို quantified ခဲ့ကြသည်။ ရက်ပေါင်း 2-4 တွင်, ဘာသာရပ်များမပါဘဲအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေအေးစက်အစည်းအဝေးများမိ 40 နာရီနှစ်ခု6ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နံနက်ယံ session တစ်ခုမှာတော့ဘာသာရပ်များ 1.0 / ကီလိုဂရမ် AMPH (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, အမေရိကန်နိုင်ငံ) 0.9% ဆား (SN-AMPH နှင့် PB-AMPH အုပ်စုများ) သို့မဟုတ်ဆားတစ်ဦးတည်း (SN-ဆားနှင့် PB-ဆားအုပ်စုများအတွက်ဖျက်သိမ်း MG ကိုလက်ခံရရှိ ) နှင့်သူတို့ pre-စမ်းသပ်မှု (အေးစက်လှောင်အိမ်) စဉ်အတွင်းလျော့နည်းအချိန်ကုန်သောလှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် session တစ်ခုမှာတော့အားလုံးဘာသာရပ်များဆားတစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိနှင့်အခြားလှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက်5တွင်, ဘာသာရပ်များတစ် 30 မိ Post-စမ်းသပ်မှုအတွက်လှောင်အိမ်ဦးစားပေးဘို့ကိုထပ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ချက်ချင်း Post-စမ်းသပ်ပြီးနောက်ဘာသာရပ်များလျှင်မြန်စွာခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏ဦးနှောက်အခြောက်အ-ရေခဲပေါ်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်အပိုင်းနောက်ပိုင်းတွင် D1R များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နှင့် DA D2-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor (D2R) autoradiographic binding ခဲ့ကြသည်။
ဦးနှောက် microdialysis နှင့် HPLC-ECD ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြ (Curtis နှင့်ဝမ်, 2007) နှင့်ဘယ်ဘက် NACC သို့ထညျ့ခဲ့သညျ (stereotaxic bregma ထံမှသြဒိနိတ်: (2.1mg / 0.6kg ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်) မေ့ဆေး pentabarbitol ဆိုဒီယမ်အောက်မှာ 6.3 မီလီမီတာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် 1 မီလီမီတာ, ventral 10 မီလီမီတာ) anterior ။ တိရစ္ဆာန်များနေ့ချင်းညချင်းကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်အဲဒီနောက်အောက်ပါနံနက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အာကာသယာဉ်ဆိုဒီယမ်, ပိုတက်စီယမ်, ကယ်လစီယမ်နဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်အဘို့အဖြေတစ်ခု isotonic နှင့်အတူ 2.3 μl / မိနစ် (144 MM NaCl, 2.8 MM KCl, 1.2 MM CaCl မှာစဉ်ဆက်မပြတ် perfused ခဲ့ကြသည်2 နှင့် 0.9 MM MgCl2 (Sved နှင့် Curtis, 1993)) ။
နေ့ချင်းညချင်းနာလန်ထူအပြီးတွင်အခြေခံနမူနာမိလေး 20 5N Perchloric acid တို၏0.1μl်ဖလားသို့စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဲဒီနောကျဘာသာရပ်များ AMPH တစ်ခု intraperitoneal (ip) ဆေးထိုး (1.0mg / ကီလိုဂရမ်) ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် dialysate နမူနာကိုစဉ်ဆက်မပြတ် 20 နာရီများအတွက်3မိကြားကာလမှာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်အထိ Dialysate နမူနာချက်ချင်း -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအေးခဲခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီနမူနာအတွက် DA နှင့် DOPAC များ၏ပမာဏလြှပျစစျထောက်လှမ်း (HPLC-ECD) နဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြသည် (Curtis နှင့်ဝမ်, 2007) ။ ယင်းနမူနာကာလ၏အဆုံးမှာဘာသာရပ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားအကဲဖြတ်ရန်ယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။
DA အဲဒီ receptor autoradiography
20-μmကြားကာလမှာမှု Coronal ဦးနှောက်အပိုင်း (120 μm) (အနေနဲ့ထူထောင်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး binding autoradiographic DA အဲဒီ receptor များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်Aragona et al ။ , 2006) ။ အတိုချုပ်, အပိုင်း 50 MM Tris-HCl (pH ကို 7.4) နှင့်ဆေးနှင့် 50 MM NaCl, 120 MM KCl,5MM CaCl်2 MM Tris-HCl အိုင်းကြားခံနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်2 နှင့် 1 MM MgCl2 တစ်ခုခုနှင့်အတူ [125ကျွန်မ] SCH23982 (D1R ligand) သို့မဟုတ် [125ကျွန်မ] 2'-iodospiperone (D2R ligand) (PerkinElmer) ။ အဲဒီနောကျကဏ္ဍများ 0.1% paraformaldehyde အတွက် fixed ခဲ့ကြသည်နှင့်အ Tris-HCl အိုင်းကြားခံအတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေး။ ဆလိုက် autoradiograms generate ရန်, ရေစက်ရေ၌နှစ်ပြီးသောခြောက်သွေ့တဲ့လွနှင့် BioMax MR ရုပ်ရှင် (Kodak) ထိတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ NACC နှင့်က CP အတွက် binding D1R နှင့် D2R ၏ optical ထုတဲ့ကွန်ပျူတာပုံရိပ်အစီအစဉ် (NIH IMAGE 3) ကို အသုံးပြု. autoradiograms ကနေတိရိစ္ဆာန်နှုန်း 1.64 ခန္ဓာဗေဒကိုက်ညီဦးနှောက်ကဏ္ဍများအတွက် quantified ခဲ့ကြသည်။
Stereotaxic cannulation နှင့် microinjection
ဘာသာရပ်များယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ stereotaxically (ကိုထညျ့သှငျးနှင့် NACC ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ဆိုဒီယမ် pentobarbital နှင့် 26-gauge နှစ်နိုင်ငံသံမဏိ cannulae (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ Inc ကို, ရော့, VA သို့) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည်Aragona et al ။ , 2003) ။ ဘာသာရပ်များ 3-7 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ , SKF 3, အ D30R ရန်, SCH 200, သို့မဟုတ်အဆိုပါ D1R agonist ်သို့မဟုတ် CSF; အေးစက်၏ 38393 ကာလ၏အသီးအသီးတွင်, 1 မိကြိုတင် AMPH ထိုးဖို့, ဘာသာရပ်များအတု cerebrospinal fluid (23390nl / ခြမ်း CSF) ဖြစ်စေ၏ microinjections လက်ခံရရှိ D2R ရန်, eticlopride (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, OH) ။ CPP ကစမ်းသပ်ပြီးနောက်အားလုံးဘာသာရပ်များလျှင်မြန်စွာခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏ဦးနှောက် histologically ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များကိုအတည်ပြုရန်ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ နေရာထား cannulae နှင့်အတူဘာသာရပ်များ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
CPP ကတစ်တွဲ-နမူနာကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် t အကျူးနဲ့ post-စမ်းသပ်မှုများအကြား conditional လှောင်အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသည် subjects သောအချိန်နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်။ အကျူးနဲ့ post-စမ်းသပ်မှုများအကြားလှောင်အိမ် entries တွေကိုလည်းအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် t AMPH တစ်ခုသို့မဟုတ် D1R agonist သို့မဟုတ် D1R သို့မဟုတ် D2R ရန်ထိခိုက် locomotor လှုပ်ရှားမှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့စမ်းသပ်။ dialysates အတွက်အခြေခံ DA နှင့် DOPAC ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာပမာဏတစ်ခုသုံးပြီးအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်။ အချိန်ကိုဖြတ်ပြီး AMPH သက်ရောက်မှု၏အကဲဖြတ်ဘို့, တစ်ဦးချင်းစီအခြေခံအတွက် DA နှင့် DOPAC ၏ပမာဏနှင့် Post-AMPH နမူနာယုတ်အခြေခံပမာဏ၏တစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများထို့နောက် ANOVA တစ်ဦးကျောင်းသား-Neuman-Keuls (SNK) posthoc စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ထပ်ခါတလဲလဲအတိုင်းအတာအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် NACC နှင့်က CP အတွက် binding D1R နှင့် D2R ၏သိပ်သည်းဆအုပ်စုကွဲပြားမှု ANOVA တစ် SNK posthoc စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 1 AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ SN နှင့် PB အထီး CPP ကယန္တရားအတွက် Pre-စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ နံနက်အေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း; (PB အထီးအဘို့ဎ =4SN အဘို့နှင့်ဎ =5ကီလိုဂရမ် 9mg /) သူတို့ပြီးတော့ဆား၏ထိုးခံသော 1.0 အုပ်စုများသို့ခွဲခြား (ဎ = SN များအတွက် 8 နှင့်ဎ = 8 PB အထီးအဘို့) သို့မဟုတ် AMPH ခဲ့ကြသည် လာမယ့်သုံးရက်ကျော် (လျူ et al ။ , 2010) ။ အဲဒီနောကျအားလုံးဘာသာရပ်များတစ် CPP က Post-စမ်းသပ်ရရှိခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု2SN (ဎ = 6) နှင့် PB (ဎ = 5) အကြား NACC အတွက် AMPH-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဘာသာရပ်များအတွက် NACC ရည်ရွယ်တစ် microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှတဆင့်အနေနဲ့ isotonic ဖြေရှင်းချက်၏စဉ်ဆက်မပြတ် perfusion နှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနာလန်ထူပြီးနောက်လေး 20 မိအခြေခံ dialysate နမူနာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဲဒီနောကျဘာသာရပ်များ AMPH တစ်ခု ip ဆေးထိုး (1.0mg / ကီလိုဂရမ်) ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် dialysate နမူနာကိုစဉ်ဆက်မပြတ် 20 နာရီသည်3မိနစ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားနမူနာနောက်ပိုင်းတွင် HPLC-ECD ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီး DA နှင့် 3,4-Dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC) ပြင်းအားအဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် (Curtis နှင့်ဝမ်, 2007).
စမ်းသပ်မှု3အဆိုပါ NACC အတွက် binding DA အဲဒီ receptor အပေါ် pair တစုံဘွန်းနှင့် AMPH ကုသမှုအကြားအပြန်အလှန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်စမ်းသပ်ပြီးသည့်ဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ဦးနှောက်အပိုင်း D1R နှင့် D2R အဲဒီ receptor autoradiography သုံးပြီး binding များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု4AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက် NACC DA receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်း။ SN အထီးနှစ်နိုင်ငံ NACC ရည်ရွယ်လမ်းညွှန် cannulae နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ တစ်ဦး3ဃပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ဘာသာရပ်များတစ် CPP က Pre-စမ်းသပ်လက်ခံရရှိပြီးတော့ကျပန်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC CSF ၏ထိုး (ဎ = 5) သို့မဟုတ်တစ်ဦးအနိမ့် (8ng / ဘေးထွက်် CSF ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း4စမ်းသပ်အုပ်စုများ၏တဦးတည်းသို့တာဝန်ပေးအပ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဎ = 8 ) သို့မဟုတ် 100ng / ဘက် (အဆင့်မြင့်; 6) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (1ng / ခြမ်းဎ =;; တစ် D23390R ရန်, SCH 4, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအနိမ့် (8ng / ဘေးထွက်၏ဎ = 100) ထိုးဒီမှာ n က D7R ရန်၏ = 2) ထိုး, eticlopride ။ သုံးဆယ်မိနစ်အကြာဘာသာရပ်များ AMPH (; ip 1.0mg / ကီလိုဂရမ်) ၏တစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း AMPH အေးစက်နေစဉ်အတွင်း3ရက်ဆက်တိုက်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ အဲဒီနောကျဘာသာရပ်များတစ် CPP က Post-စမ်းသပ်ရရှိခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု5PB ယောက်ျားအတွက် AMPH-သွေးဆောင် CPP ကဖြန်ဖြေအတွက် NACC D1Rs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ SCH 10 (1ng / ခြမ်း, သို့မဟုတ်တစ် D38393R ရန်; PB ဘာသာရပ်များအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC CSF ၏ထိုး (ဎ = 0.4) သို့မဟုတ်တစ် D12R agonist, SKF 1်CSF ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသုံးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည် (ဎ = 23390 4ng / ခြမ်း) n သ = 10), AMPH အေးစက်ဖို့ကြိုတင်။ ဦးနှောက် cannulation, AMPH ထိုးနှင့် CPP ကစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှု4ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတူညီခဲ့ကြသည်။
Pair ကို Bond အတွေ့အကြုံကို AMPH ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုမှာတော့ AMPH ကုသမှု (pair တစုံဘွန်းအပြုအမူအပေါ် AMPH ထိတွေ့မှုတစ်ခု inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်း, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးအာရုံချို့ယွင်းလျူ et al ။ , 2010) ။ AMPH ဆုလာဘ်အပေါ် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကို: ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ 1.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် AMPH နှင့်အတူအေးစက်၏သုံးရက် (SN ယောက်ျားတစ်ဦး CPP ကသွေးဆောင်t = 2.45, p <0.05) သို့သော်အမျိုးသမီးနှင့် (၂) ပတ်မျှတွဲထားသည့်အထီး (PB PB အထီး) ။ပုံ 1a) ။ ဆားထိုးအုပ်စုသည်ဖြစ်စေမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ အရေးကြီးတာကမရှိကွဲပြားခြားနားမှု PB ယောက်ျားအတွက်ချို့ယွင်း CPP ကအဆိုပါအပြုအမူစမ်းသပ်မှု (ကာလအတွင်းပြောင်းလဲ locomotor လှုပ်ရှားမှုကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, အကျူးနဲ့ post-စမ်းသပ်မှုများအကြားတိရိစ္ဆာန်ရဲ့လှောင်အိမ်ကူး၏ကြိမ်နှုန်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပုံ 1b).
ဖက်တမင်းဆေးပြား (AMPH) အေးစက်လိင်ရင်တော့မှားမယ် (SN) တွင်တစ်ဦး conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) induces ပေမယ့်ကပ်လျက်တည်ရှိ (PB) အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တွဲဘူး။ (က) အေးစက်၏3ရက်အတွင်း (အသီးသီး SN-ဆားသို့မဟုတ် PB-ဆား,) ဆားကိုလက်ခံရရှိကြောင်း SN သို့မဟုတ် PB ယောက်ျား ...
AMPH ကုသမှုနှစ်ခုစလုံး SN နှင့် PB ယောက်ျားအတွက် NACC အတွက် DA လွှတ်ပေးရန် induces
microdialysis အခြေခံနမူနာအတွက် DA သို့မဟုတ် DOPAC ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာပမာဏသာရှိ SN နှင့် PB အထီးအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု (ရှိခဲ့သည်ပုံ 2, insets) ။ AMPH အုပ်ချုပ်ရေး (extracellular DA အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးထုတ်လုပ်F(12, 108) = 8.42, p <0.001) ။ သို့သော်ဤတိုး၏ပမာဏနှင့်ကြာချိန်သည် SN နှင့် PB အထီးအကြားခြားနားသည်မဟုတ် - ပထမ ဦး ဆုံးနမူနာကာလနှစ်ခု (စုစုပေါင်း ၄၀ မိနစ်) တိုင်းအတွက် DA အဆင့်သည်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်အခြေခံထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပြီးထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းအခြေခံသို့ပြန်သွားသည် (ပုံ 2ထိပ်တန်း panel က) ။ AMPH အုပ်ချုပ်ရေးသိသိသာသာ (နှစ်ဦးစလုံး SN နှင့် PB ယောက်ျားအတွက် NACC အတွက် extracellular DOPAC လျော့နည်းသွားF(12, 108) = 13.54, p <0.001) နှင့်, တဖန်, ဤသက်ရောက်မှုနှစ် ဦး စလုံးအုပ်စုများအတွက်အလားတူခဲ့ကြသည်။ နမူနာများမပြီးဆုံးမှီ SN နှင့် PB ယောက်ျားများသည်အခြေခံအဆင့်ကိုပြန်လည်မရရှိကြပါ။ပုံ 2, အနိမ့် panel က) ။
နျူကလီးယပ် accumbens လိင်ရင်တော့မှားမယ်၏ (NACC) (SN) နှင့် pair တစုံအတွက် extracellular dopamine (DA) နှင့် 3,4-Dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC) ၏အဆင့်ဆင့်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုကိုအောက်ပါ (PB) အထီးကပ်လျက်တည်ရှိ။ အခြေခံ dialysates အတွက် DA နှင့် DOPAC ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာပမာဏ ...
AMPH ကုသမှု differential အဆိုပါ SN ၏ NACC နှင့် PB ယောက်ျားအတွက် D1R binding ပွောငျးလဲ
ယခင်လေ့လာမှုများ AMPH ကုသမှု NACC D1R ဗီဇနှင့်ပရိုတိန်းစကားရပ် (တိုးမြှင့်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီလျူ et al ။ , 2010) ။ ထို့အပြင် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကို (D1R binding elevatesAragona et al ။ , 2006) အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ NACC ၌တည်၏။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ NACC အတွက် binding DA အဲဒီ receptor မြားတှငျပွောငျးလဲ pair တစုံဘွန်းနှင့် AMPH ဆုလာဘ်အကြားအပြုအမူအပြန်အလှန်အခြေခံစေခြင်းငှါတွေးဆ။ ကျနော်တို့ binding autoradiographic DA အဲဒီ receptor များအတွက် CPP ကစမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ဦးနှောက်အပိုင်းလုပ်ငန်းများ၌။ Two-လမ်း ANOVA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (NACC အတွက် binding D1R အပေါ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ (SN သို့မဟုတ် PB) နှင့်ဆေးထိုးအမျိုးအစား (ဆားသို့မဟုတ် AMPH) အကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်ညွှန်ပြF(1, 29) = 17.63, p <0.01) ။ အဆိုပါ posthoc စမ်းသပ်မှု SN-AMPH နှင့် PB-ဆားအုပ်စုများ၏ NAcc အတွက် binding D1R ၏သိပ်သည်းဆနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် SN-saline နှင့် PB-AMPH အုပ်စုများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (ပုံ 3a) ။ AMPH ကုသမှုမဟုတ်သလို pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကိုမျှမပြုပါ (NACC အတွက် binding D2R ၏သိပ်သည်းဆပြောင်းလဲပုံ 3b) ။ ထို့အပြင်မျှအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု D1R ဒါမှမဟုတ် caudate putamen အတွက် binding D2R (Data ပြသကြသည်မဟုတ်) ဖြစ်စေမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
Pair ကို Bond နှင့် AMPH binding DA အဲဒီ receptor ကိုထိခိုက်ဖို့အပြန်အလှန်။ (က) AMPH အေးစက်သိသိသာသာထိန်းချုပ်မှု (SN-ဆား) ထိုးသွင်းဆားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, SN အထီး (SN-AMPH) တွင် binding NACC D1R ၏သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် PB အထီးဆားနှင့်အတူထိုးသွင်း ...
NACC D1R activation SN ယောက်ျားအတွက် AMPH ဆုလာဘ် mediates
အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တစ် D1R ၏အရေပြားအောက်ဆုံးထိုး, ဒါပေမယ့်မရ D2R မှာတော့ရန် AMPH အေးစက်အစည်းအဝေးများ AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (ဖျက်သိမ်းမတိုင်မီလျူ et al ။ , 2010) ။ သည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ်အတွက် AMPH ဆုလာဘ်အတွက် NACC DA ၏ထူထောင်အခန်းကဏ္ဍ (ပေးထားYokel နှင့်ပညာရှိ, 1975; Kehoe et al ။ , 1996), ကျနော်တို့အေးစက်နေစဉ်အတွင်း NACC အတွက် D1Rs မှဝင်ရောက်ခွင့် SN အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းတွေးဆ။ ကျနော်တို့ NACC သို့ cerebrospinal fluid (CSF) ထိုးဆေးကိုလက်ခံရရှိကြောင်း SN အထီး AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (ပြသကြောင်းတွေ့ရှိရt = 2.90, p <0.01) (ပုံ 4) ။ သို့သော်တစ်ဦး D1R ရန်, SCH 23390 ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC အုပ်ချုပ်ရေး, တစ်ဦးအနိမ့် (4 ng / ခြမ်း) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (100 ng / ခြမ်း) ဖြစ်စေမှာကြိုတင်အေးစက်အစည်းအဝေးများမှထိုး, AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (ဖျက်သိမ်းပုံ 4) ။ ဆနျ့ကငျြဖြစ်စေမယ့်အနိမ့် (2 ng / ခြမ်းမှာ D4R ရန်, eticlopride ၏, အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC အုပ်ချုပ်ရေး; t = 3.25, p <0.01) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (100 ng / ဘေးထွက်; t = 2.30, p <0.05) ထိုး, AMPH- သွေးဆောင် CPP ကိုပိတ်ဆို့ဘူးပုံ 4) ။ ကွဲပြားခြားနားမှု (Data ပြသကြသည်မဟုတ်) locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကုသမှုမျှမသက်ရောက်ညွှန်ပြဆိုအုပ်စုတစ်စုအတွက် Pre-post-စမ်းသပ်မှုများအကြားလှောင်အိမ်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ကြိမ်နှုန်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်မရှိပါ။
လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက် NACC DA D1-type အမျိုးအစား (D1R) ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် D2-type အမျိုးအစား (D2R) receptors ။ အားလုံးဘာသာရပ်များအေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း AMPH ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အေးစက်၏3ကာလ၏အသီးအသီးတွင်, 30 ကြိုတင် AMPH မှ MIN ...
အဆိုပါ NACC အတွက် D1Rs ၏ activation PB ယောက်ျားအတွက် AMPH-သွေးဆောင် CPP ကဖွ
ယခင်လေ့လာမှုများ (NACC D1R activation AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်ရွေးချယ်ကျူးကျော်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းချို့ယွင်းနေသောပြသကြAragona et al ။ , 2006; လျူ et al ။ , 2010) ။ သူတို့အားအပြုအမူတွေအတွက် D1Rs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားသောနှင့် NACC D1R binding သောတွေ့ရှိချက် PB-ဆားနှင့် SN-AMPH အထီး (ထက် PB-AMPH ယောက်ျားအတွက်အနိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ပုံ 3a), ကျနော်တို့က NACC အတွက် D1R လှုပ်ရှားမှု PB ယောက်ျားအတွက် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏မရှိခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်နိုင်သည်လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေးဆ။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကြိုတင် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်သုံးအေးစက်အစည်းအဝေးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမှအထူး site ကို-The NACC သို့ D1R agonist သို့မဟုတ်ရန်ပါဝင်တဲ့ CSF သို့မဟုတ် CSF ထိုးသွင်း။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း CSF ထိုးခံသော PB အထီး (AMPH-သွေးဆောင် CPP ကမပြခဲ့ပါဘူးပုံ 5) ။ အဆိုပါ D1R agonist ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ထိုးလက်ခံရရှိကြောင်းသို့သော် PB အထီး (t = 4.69, p <0.001), ဒါပေမယ့်ရန်မဟုတ်, AMPH- သွေးဆောင် CPP ကိုပြသပုံ 5) ။ pre-နှင့်မည်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဘို့ Post-စမ်းသပ်မှုများအကြားလှောင်အိမ်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ကြိမ်နှုန်းမကွဲပြားမှု (Data ပြသကြသည်မဟုတ်) ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ NACC အတွက် DA D1-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor (D1R) ၏ activation pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးဘာသာရပ်များကပ်လျက်တည်ရှိ pair တစုံတို့အေးစက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း AMPH ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အေးစက်၏3ကာလ၏အသီးအသီးတွင်, 30 ကြိုတင် AMPH မှ MIN ...
လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့လာစရာများ (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု / အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာသရုပ်ပြပါပြီလူငယ်တို့ et al ။ , 2011a) ။ ကြောင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ၏မျိုးဆက်အတွက်၎င်း၏လူသိများတဲ့အခန်းကဏ္ဍငှါ, mesolimbic DA system ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သော့ချက်အနေအထား၌တည်ရှိ၏။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီက AMPH ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးချို့ယွင်းနေသောနှင့် NACC DA (ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု mediates ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီလျူ et al ။ , 2010) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ကြောင်း pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကို AMPH-သွေးဆောင် CPP ကချို့ယွင်းနှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း NACC DA ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများ pair တစုံဘွန်းနှင့် AMPH ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အပြန်အလှန်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော interaction ကထိန်းညှိအတွက် NACC DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုယခင်ကထူထောင် CPP ကပါရာဒိုင်းအသုံးပြုသော (လျူ et al ။ , 2010; လူငယ်တို့ et al ။ , 2011b) AMPH ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆုလာဘ်-အပါအဝင် hedonics, အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူမှုနှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု (၏တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြေရှင်းရန်ခွင့်ပြုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အရပ်ဌာနအေးစက်အပေါ် AMPH များ၏သက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်ဖို့စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဝေါဟာရကို '' အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ '' ကိုအသုံးပြုဖို့Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003) တို့တွင်အရှင်သခင်ရာအရပျအေးစက်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ (Hnasko et al ။ , 2005; အဖြူရောင် et al ။ , 2005; Cunningham နှင့် Patel က, 2007), သူတို့ကိုအကြားကွဲပြားခြားနားသွားစရာမလိုဘဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို AMPH အေးစက် PB SN အတွက် CPP ကသွေးဆောင်ပေမယ့်မပေးကြောင်းသရုပ်ပြ, အထီး voles နှင့်ကဲ့သို့သော, ထို pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကို AMPH ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကျပထမဦးဆုံးပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများကိုဆက်ကပ်။ ဒီအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုဖြစ်သော်လည်းယခင်လေ့လာမှုများအခြားလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ / အချက်များလည်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါသရုပ်ပြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်မျိုးစုံလူမှုရေးအလိုက်နှင့်အတူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လျော့နည်း AMPH မွေး (Bardo et al ။ , 2001) နှင့်ကိုကင်း (Schenk et al ။ , 1987) တစ်ဦးတည်းမွေးကြွက်များထက်ထပ်ခါတလဲလဲအစည်းအဝေးများကျော်။ အလားတူပင်ဝတ္ထုတ္ထုများနှင့်လူမှုရေးအလိုက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လျော့နည်း AMPH ပါရှိသောကြောင့်တစ်ဦးကြွယ်ဝစေပတ်ဝန်းကျင်တွင်မွေးကြွက်, (ရှိရာသို့အလျင်အမြန် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူငွိမျးနှင့်ကြွက်များတစ်ဦးတည်းသျောခဲ့ဘူးထက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံပြန်လည်ဖို့ AMPH မြင့်မားဆေးများလိုအပ်Bardo et al ။ , 2001; အစိမ်းရောင် et al ။ , 2002; လှေကား et al ။ , 2006; cf, Schenk et al ။ , 1988; Bardo et al ။ , 1995) ။ ထို့အပွငျကိုကင်းဘို့လီဗာ-စာနယ်ဇင်းမှလေ့ကျင့်သင်ကြားအမျိုးသမီးကြွက် (ကိုယ်ဝန်ရှိဖြစ်လာနှင့် parturition အောက်ပါပြီးနောက်သိသိသာသာနည်းပါးလာတုံ့ပြန်မှုပြသHecht et al ။ , 1999), မိခင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် neurobiological ပြောင်းလဲမှုများကိုကင်း၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကျစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ ဒါဟာအယူအဆနောက်ထပ်ကညာကြွက်များကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်ကာပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူတစ်ဦးကိုကင်း-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံနေသည်Seip et al ။ , 2008), နို့တိုက်ဆည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကင်းနဲ့ဆက်စပ်တဦးတည်းကိုကျော်ခွေးများနှင့်ဆက်စပ်ကာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုနှစ်သက်သော်လည်း (Mattson et al ။ , 2001) ။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများလူမှုရေးအချက်များ psychostimulants ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုလျော့ချစေခြင်းငှါဆိုလို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုသည်ဤတွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့နှင့် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် AMPH ဆုလာဘ်ချို့ယွင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သော AMPH အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှု psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ, NACC DA လွှတ်ပေးရန်နှင့် DA receptors (များ၏နောက်ဆက်တွဲ activation အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တိုးတို့အပေါ်မှာမှီခိုနေကြYokel နှင့်ပညာရှိ, 1975; di Chiara နှင့် Imperato, 1988; Bergman et al ။ , 1990; Kehoe et al ။ , 1996) ။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်များဖြစ်စေမြားတှငျပွောငျးလဲ AMPH ဆုလာဘ်အပေါ် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံလိမ့်မည်။ ဖြန့်ချိ DA ၏အဆင့်ဆင့်နီးကပ်စွာ (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီVolkow et al ။ , 1999; Drevets et al ။ , 2001; Leyton, 2010) နှင့် psychostimulant-သွေးဆောင် NACC DA လွှတ်ပေးရန်အစောပိုင်းအသက်တာ၌ဥပမာအထီးကျန်မှုတွေ (အချို့ကိစ္စများတွင်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး: (Kehoe et al ။ , 1996; Kosten et al ။ , 2005)) ဒါပေမယ့်မပေးအခြားသူများကို (ဥပမာ, လူမှုရေးအိုးအိမ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံ: (Bardo et al ။ , 1995)) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ AMPH ကုသမှု (ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ, အ NACC အတွက် extracellular DA များ၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်di Chiara နှင့် Imperato, 1988; Curtis နှင့်ဝမ်, 2007; McKittrick နှင့် Abercrombie, 2007) ။ ထို့အပွငျ AMPH နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက် extracellular DOPAC ၏အဆငျ့အနေနဲ့ချက်ချင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကျဆင်းခြင်းသွေးဆောင်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့် monoamine oxidase-တစ်ခု DA ၏ပျက်စီးခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အင်ဇိုင်း (၏တားစီးအတွက် AMPH ၏လူသိများအခန်းကဏ္ဍသူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်အစိမ်းရောင်နှင့် el Hait, 1978; ဂျုံးစ် et al ။ , 1998; Curtis နှင့်ဝမ်, 2007) ။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာပြင်းအားနှင့် NACC အတွက် extracellular ပြောင်းလဲမှုများယာယီပုံစံက AMPH ဆုလာဘ်အပေါ် pair တစုံဘွန်း၏သက်ရောက်မှု NACC DA များလွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြု, SN နှင့် PB အထီးအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကို AMPH-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဇီဝြဖစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမပြုခဲ့သော်လည်း, သူက (ဆိုလိုသည်မှာ, DA အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆှဖှေဲ့) binding NACC DA အဲဒီ receptor အပေါ် AMPH များ၏သက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့တယျ။ ဥပမာအားဖြင့်, ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, AMPH ကုသမှု (SN ယောက်ျားအတွက် NACC D1R စကားရပ်တိုးလာလျူ et al ။ , 2010) နှင့် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကိုလည်း (binding NACC D1R မွှငျ့တငျAragona et al ။ , 2006) ။ PB အထီးအောက်ပါအချက်များကို AMPH ကုသမှု binding D1R အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းပြသခဲ့သည်အဖြစ်သို့သော် NACC D1R အပေါ် AMPH ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစညျး, SN အထီးမှနှိုင်းယှဉ်ပါက PB ယောက်ျားအတွက်ပြောင်းပြန်ခဲ့သည်။ အုပ်စုတစုကွဲပြားမှုလက်ရှိသို့မဟုတ်ယခင်လေ့လာမှုများ (တစ်ခုခုအတွက် binding NACC D2R အတွက်မတွေ့Aragona et al ။ , 2006; လျူ et al ။ , 2010) ။ အတူတူကဤဒေတာတစ်ခုချင်းစီကိုဆောင် D1R-တိကျတဲ့မှ SN ယောက်ျား၏ NACC အတွင်းအပြောင်းအလဲများကြောင့် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံနှင့် AMPH ထိတွေ့မှုသရုပ်ပြပါ။ AMPH အတိုက်အခံထိခိုက်နစ်နာ NACC D1R SN နှင့် PB voles အတွက် binding အဖြစ်ထပ်မံသောကြောင့် data ကိုလူမှုရေး Bond ဟာ mesolimbic DA system ပေါ်တွင် AMPH ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်အရေးပါသောဖြန်ဖြေအချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ Correspondingly, ကိုကင်းအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ကညာအမျိုးသမီးအတွက် mesolimbic DA စနစ်ကတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးခိုင်မာတဲ့အပြုသဘောသွေးအောက်ဆီဂျင်-Level-မှီခို (BOLD) signal ကိုပြောင်းလဲမှု, သေးသောနို့တိုက်ဆည်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာ BOLD တုံ့ပြန်မှု, သွေးဆောင်တွေ့ရှိထားပြီး (ကူးတို့ et al ။ , 2005) -further လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ neurobiological တုံ့ပြန်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှစခွေငျးငှါကိုညွှန်း။ သူတို့ဖြန့်ချိ neurotransmitters ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့တုန့်ပြန် modify ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုကဲ့သို့သောအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့သည်အဖြစ်အဲဒီ receptor binding အတွက် ALTER, အပြုအမူအပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ SN အထီး, D1R D1R ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ပိတ်ဆို့အဖြစ် AMPH အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ, ဒါပေမယ့်မပြုစေခြင်းငှါခညျြနှော D2R အတွက်ဥပမာ AMPH-သွေးဆောင်တိုး၌, ဘယျလိုမှမ AMPH-သွေးဆောင် CPP က-တစ်ဦး (အခြားမျိုးစိတ်အတွက်သူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှာတွေ့Baker et al ။ , 1998; အိုး et al ။ , 2010) ။ အကျိုးဆက် PB ယောက်ျားအတွက်, AMPH အေးစက်နေစဉ်အတွင်း NACC D1R activation PB ယောက်ျားအတွက် AMPH-သွေးဆောင် CPP က enabled အဖြစ် AMPH-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏မရှိခြင်းအခြေခံစခွေငျးငှါခညျြနှော NACC D1R လျော့နည်းသွားသည်။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာ NACC D1R စကားရပ် / ဆှဖှေဲ့အတွက် AMPH-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်း AMPH ဆုလာဘ်အပေါ် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးအကြားဆက်ဆံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသောအခြားလေ့လာမှုများကနေသူများအကြားနှစ်ဦးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မျဉ်းပြိုင်ဖော်ပြရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးစွာ pair တစုံဘွန်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီလွတ်လပ်စွာအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ mesolimbic DA စနစ်အလားတူအပြောင်းအလဲများကို (ဆိုလိုသည်မှာတိုးမြှင် D1R binding (များတွင်ရလဒ် AMPH ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်Aragona et al ။ , 2006) နှင့်စကားရပ် (လျူ et al ။ , 2010)) အဆိုပါ NACC ၌တည်၏။ အလားတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့် psychostimulants တစ်ဦးချင်းစီမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု (ကြွက်များတွင် NACC shell ကိုအတွင်းအလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်Robinson နဲ့ Kolb, 1999; အိုး et al ။ , 2010) ။ ထို့အပွငျကညာအမျိုးသမီးအတွက်နို့တိုက်ဆည်နှင့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် suckling pup အဆိုပါ mesocorticolimbic စနစ်အပြုသဘော BOLD activation အလားတူပုံစံများသွေးဆောင် (ကူးတို့ et al ။ , 2005) ။ အတူတူကဤဒေတာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများသပ္ပါယ်အပြုအမူတွေ (ဖျန်ဖြေကြောင့်အာရုံကြောယန္တရားများနှင့်ဆားကစ်လုသောအယူအဆကိုထောကျပံ့Panksepp et al ။ , 2002) ။ ဒုတိယအကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ SN နှင့် PB ယောက်ျားအတွက် AMPH ဖို့ differential ကို neurobiological တုံ့ပြန်မှု AMPH-သွေးဆောင်အပြုအမူအတွက်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားမှုအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ (ကညာအမျိုးသမီးအတွက်မှတ်ချက်ပြုလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) အလားတူပင် lactating ကြွက်များကိုကင်းတုံ့ပြန်အတွက် mesocorticolimbic DA သည့်စနစ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖိနှိပ်မှုပြသ (ကူးတို့ et al ။ , 2005) နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လျှော့ချရေး (Hecht et al ။ , 1999), နောက်ထပ်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံနဲ့ဆက်စပ်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ attenuate စေခြင်းငှါအယူအဆ supporting ။
လူကြီးအတွက်ခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ရှေ့မှောက်တွင် (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက်လျော့ကျစေခြင်းငှါKosten et al ။ , 1987) ။ သို့သော်ဤအမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများအတော်လေးမသိသော-ဖြစ်ကောင်းကြောင့်သင့်လျော်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်၏မရှိခြင်းဖြစ်ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖို့အားနည်းချက်အပေါ်အရွယ်ရောက်လူမှုရေးစဘွန်း၏အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကြောင့် pair တစုံဘွန်းအတွေ့အကြုံကို AMPH ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကျနှင့် mesolimbic DA system ကို-အထူးသဖြင့် NACC-အာမခံအတွက် DA neurotransmission ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကဖော်ပြသည်။ အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သူတို့နှင့်အတူဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, (လျူ et al ။ , 2010), နောက်ဆုံးမှာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသို့မဟုတ်ကုသမှုသို့အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးစေခြင်းငှါအရာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု / အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေး Bond အကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများ၏အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုမြဲမြံစေ။
ကျနော်တို့ကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရေးပါစာဖတ်ခြင်းအဘို့လော်ဒီယာ Lieberwirth, ကယ်လီလဲ့, အမျိုးသမီး Melissa မာတင်, အာဒံ Smith ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကြှနျုပျတို့သညျဤစာမူကို၏အစောပိုင်းမူကြမ်းဖတ်နေဘို့နဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးတန်အကြံပြုချက်များပေးဘို့တယ်ရီအီးရော်ဘင်ဆင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ZXW မှ JTC မှ Kay, HDR31-25570 မှ DAF01-48462 ပေးအပ်နှင့် DAR01-19627, DAK02-23048 နှင့် MHR01-58616 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Aragona BJ, Detwiler JM, အ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားဆုလာဘ်။ neuroscience လက်တ။ 2007; 418: 190-194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Baker DA, Fuchs RA, Specio SE, Khroyan တီဗီ, Neisewander JL ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်စက်ခေါင်းများနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုအပေါ် SCH-23390 ၏ intraaccumbens အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ synapses ။ 1998; 30: 181-193 ။ [PubMed]
ခေါင်းလောင်း NJ, Forthun LF, Sun က SW ။ attachment, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရည်အသွေးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု: အန္တရာယ်အပြုအမူများ၏လေ့လာမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစား။ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 2000; 35: 1177-1206 ။ [PubMed]
Bergman J ကို, Kamien JB, Spealman RD ။ ရွေးချယ် dopamine: D (1) နှင့် D ကို (2) ရန်အားဖြင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1990; 1: 355-363 ။ [PubMed]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဆုလာဘ် parsing ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2003; 26: 507-513 ။ [PubMed]
နန် Ka, မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် PR စနစ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပူးတွဲမှု၏ရှုထောင့်, စည်းမျဉ်းများနှင့်ရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်စေ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ။ 1995; 21: 267-283 ။
Caspers KM, Cadoret RJ, Langbehn: D, Yucuis R ကို, Troutman ခတရားမဝင်တ္ထုများ၏တစ်သက်တာအသုံးပြုမှုမှပူးတွဲမှုစတိုင်နှင့်ရိပ်မိလူမှုရေးထောက်ခံမှုပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2005; 30: 1007-1011 ။ [PubMed]
Cunningham CL, ကြွက်များတွင်အီသနော-တွဲအမြင်အာရုံ cue မှ Pavlovian ချဉ်းကပ်၏ Patel က P. Rapid သော induction ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 192: 231-241 ။ [PubMed]
Curtis JT, microtine ကြွက်များတွင်ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားသက်ရောက်မှု: monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ neuroscience ။ 2007; 148: 857-866 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1988; 85: 5274-5278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ellickson PL, Collins RL, ဘဲလ် RM ။ ဆေးခြောက်ထက်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှု: လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်အရာအဘို့တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကိုဘယ်လိုအရေးကြီးသလဲ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 1999; 34: 317-346 ။ [PubMed]
ကူးတို့ CF, Kulkarni P ကို, Sullivan က JM, Jr ကခက်ခဲဂျာ Messenger ကို TL, Febo အမ် Pup နို့စို့ကိုကင်းထက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖြစ်ပါသည်: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်သုံးရှုထောင်ကွန်ပျူတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှသက်သေအထောက်အထား။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 149-156 ။ [PubMed]
အစိမ်းရောင် AL, el Hait MA ။ (+) က mouse ကိုဦးနှောက် monoamine oxidase ၏တားစီး - Vivo အတွက်စိတ်ကြွဆေး။ J ကို Pharm Pharmacol ။ 1978; 30: 262-263 ။ [PubMed]
အစိမ်းရောင်က TA, Gehrke BJ, Bardo MT ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်း: fixed- အဘို့အထိုး-တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယား။ Psychopharmacology (Berl) 2002; 162: 373-378 ။ [PubMed]
Hecht GS, လှံ NE, လှံ LP ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးသွေးကြောသွင်းကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်တိုးတက်သောအချိုးအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ dev Psychobiol ။ 1999; 35: 136-145 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, ဂရင်း, MA, အဖြူရောင် FJ ။ အဆိုပါ mesoaccumbens dopamine စနစ်ကိုကင်းများ၏ Electrophysiological သက်ရောက်မှု: ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1989; 251: 833-839 ။ [PubMed]
Hnasko TS, Sotak BN, Palmiter RD ။ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာမော်ဖင်းအကိုက်ဆုလာဘ်။ သဘာဝ။ 2005; 438: 854-857 ။ [PubMed]
Insel TR, Hulihan တီဂျေ။ pair တစုံဘွန်းများအတွက်တစ်ဦးကကျား, မ-တိကျတဲ့ယန္တရား: monogamous voles အတွက် oxytocin နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995; 109: 782-789 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ် SR, Gainetdinov RR, Wightman RM, caron MG ။ စိတ်ကြွဆေးလုပ်ဆောင်ချက် mechanisms အဆိုပါ dopamine Transporter ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာဖျောပွထားပါ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 1979-1986 ။ [PubMed]
Kehoe P ကို, shoemaker WJ, Triano L ကို, ဟော့ဖ်မန်း J ကို, Arons C. အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်လူငယ်အတွက် ventral striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်မြားတှငျပွောငျးလဲထုတ်လုပ်သည့်မွေးကင်းစကလေးများကြွက်များတွင်အထီးကျန်ထပ်ခါတစ်လဲလဲ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1996; 110: 1435-1444 ။ [PubMed]
Koob gf, Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ neurobiology ။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 1997; 9: 482-497 ။ [PubMed]
Kosten က TA, Zhang က XY, Kehoe P. Neurochemical နှင့်မွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005; 314: 661-667 ။ [PubMed]
Kosten TR, Jalali B, Steidl JH, Kleber HD ကို။ opiate အလွဲသုံးစားမှု relapse မှအိမ်ထောင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အပြန်အလှန်၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 1987; 13: 387-399 ။ [PubMed]
Leyton အမ်အလိုဆန္ဒ၏ neurobiology: dopamine နဲ့စိတ်ဓါတ်များနှင့်လူသားတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များ၏စည်းမျဉ်း။ ခုနှစ်တွင်: Kringelback ML, Berridge KC, အယ်ဒီတာများ။ ဦးနှောက်ရဲ့အပျော်အပါး။ နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, Inc မှ, 2010 ။ စစ။ 222-243 ။
လျူ Y ကို, Aragona BJ, Young က ka, Dietz DM, Kabbaj M က, Mazei-Robison M က, Nestler EJ, ဝမ် Z. နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2010; 107: 1217-1222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mattson BJ, ဝီလျံက S, Rosenblatt JS, Morrell JI ။ ယင်းကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလတစ်လျှောက်လုံးခွေးများနှင့်ကိုကင်းနှစ်ခုအပြုသဘောအားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2001; 115: 683-694 ။ [PubMed]
McKittrick CR, Abercrombie ED ။ နျူကလိယအတွင်း catecholamines မြေပုံ accumbens: Basal အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် norepinephrine နှင့် dopamine ၏စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ efflux ။ J ကို Neurochem ။ 2007; 100: 1247-1256 ။ [PubMed]
Panksepp J, Knutson B, Burgdorf J. စွဲလမ်းမှုအတွက် ဦး နှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်၏အခန်းကဏ္: - အာရုံကြော - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်နှင့် 'Self- report' တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်သစ်။ စွဲ။ 2002; 97: 459-469 ။ [PubMed]
အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand မိုင်, ယု L ကို, Coolen LM ။ သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ် Neuroplasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67: 872-879 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB ။ ဦးနှောက်နှင့်နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကထုတ်လုပ်အပြုအမူအတွက်ခံနိုင်ရည်အပြောင်းအလဲများကို: စိတ်ကြွဆေးစိတ္တ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကဲဖြတ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1986; 396: 157-198 ။ [PubMed]
စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ ALTER ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 1598-1604 ။ [PubMed]
Schenk S က, ရော်ဘင်ဆင်ခ, Amit Z. အိမ်ရာအခြေအနေများစိတ်ကြွဆေး၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိခိုက်ရန်ပျက်ကွက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1988; 31: 59-62 ။ [PubMed]
Schenk S က, Lacelle, G, Gorman K ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကလွှမ်းမိုးကြွက်များတွင်ဖြစ်သူ Amit Z. ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ etiology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ neuroscience လက်တ။ 1987; 81: 227-231 ။ [PubMed]
Seip KM, Pereira M က, Wansaw အမတ်, Reiss JI, Dziopa EI, Morrell JI ။ အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ရွှေ့ဆိုင်ကာလတစ်လျှောက်ကိုကင်းများမက်လုံးပေး salience ။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 199: 119-130 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လှေကား DJ သမား, Klein ED, Bardo MT ။ စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် sucrose-ထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်၏မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် reinstatement အပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏သက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2006; 17: 597-604 ။ [PubMed]
Sved AF, Curtis JT ။ နျူကလိယ Tractus solitarius အတွက်အမိုင်နိုအက်ဆစ် neurotransmitters: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ J ကို Neurochem ။ 1993; 61: 2089-2098 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Wong ကနေ C, Hitzemann R ကို, Pappas ရော်ဘာ။ လူသားတွေအတွက် psychostimulants ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများ: D (2) receptors ၏ဦးနှောက် dopamine နဲ့ထေိုအတွက်တိုးနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1999; 291: 409-415 ။ [PubMed]
Vungkhanching M က, Sher KJ, ဂျက်ဆင် KM, Parra ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အစောပိုင်းလူကြီးအတွက်အရက်နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်များ၏မိသားစုသမိုင်းမှပူးတွဲမှုစတိုင် relation ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2004; 75: 47-53 ။ [PubMed]
White ကမိုင်, ချိုင် SC, Hamdani အက်စ်ဟာမော်ဖင်းအကိုက်အေးစက် cue preference ကိုသင်ယူခြင်း: cue configuration ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2005; 81: 786-796 ။ [PubMed]
Yokel RA, ပညာရှိ RA ။ ဆုလာဘ်တစ်ခု dopamine သီအိုရီအဘို့အဂယက်: တိုးမြှင့်လီဗာကြွက်များတွင် pimozide ပြီးနောက်စိတ်ကြွဆေးအဘို့အနှိပ်။ သိပ္ပံ။ 1975; 187: 547-549 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ Ka, Gobrogge KL, ဝမ် ZX ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်ထိန်းညှိအတွက် mesocorticolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2011a; 35: 498-515 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လူငယ်တို့ Ka, လျူ Y ကို, Gobrogge KL, Dietz DM, ဝမ် H ကို, Kabbaj M က, ဝမ် Z. ဖက်တမင်းဆေးပြားဟာ monogamous အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်အပြုအမူနှင့် mesocorticolimbic dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက် Res ။ 2011b; 1367: 213-222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]